BF oo ka doodaya sharci nin ajnabi madax ugu noqonayo Bangiga Dhexe
MUQDISHO, Somalia - Xildhibaanada Gollaha Shacabka ee Baarlamanka Federaalka Somalia ayaa ka doodaya wax ka bedelka Xeerka iyo hanaanka maamul ee Bangiga, si markii ugu horeysay qof ajnabi ah loogu magacaabo Gudoomiye.
Madaxda sare ee dowladda Federaalka ayaa isla meel dhigay in nin u dhashay Ingiriiska loo dhiibo xilka Gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Somalia, iyadoo booskan shaqo lagu xayeesiiyay August 2018 Wargeyska "The Economist".
Wasiiradda Xildhibaanada ah ayaa buux dhaafiyy Kulanka maanta ee Gollaha Shacabka, iyagoo awoodda isagu geynayo sidii uu ku meel-mari lahaa qorshaha Villa Somalia ee ninka ajnabiga ah loogu dhiibayo Bangiga Dhexe.
Xildhibaanno iyo siyaasiyiin badan ayaa dhaliilayay qorshaha Villa Somalia ee ninka Ajnabiga ah xilkan culus loogu aaminayo, waxayna sheegeen inay qalad tahay in iyadoo la heli karo dhaqaalyahan Soomaaliyeed, dibadda laga keeno qof ajnabi ah.
Xildhibaanada ayaa sidoo ka doodaya Sharciga Hantidhowrka Guud ee Qaranka.
Hindisaha xeerka maamulka Bankiga dhexe oo isna wax ka bedal lagu sameeyay ayaa cod-qaadidiisa waxay kusoo aadaysaa iyada oo ay taagan tahay muran ku aadan in loo magacaabayo Gudoomiye ajnabi ah.
Sharcidejiyaal kahor kulanka hadlay ayaa daboolka ka qaaday in qodobka sheegaya in qof aan Soomaali ahayn, Muslim-na ahayn uusan qaban karin xilkaan laga bedalay xeerka, iyaga oo ku eedeeyay xukuumadda.
"Xeerka maamulka Bankiga Dhexe wuu horyaalaa Gollaha, isla isaga ayaana go’aan ka gaari doona, hadii Gudoonka horkeeno," ayuu yiri Xildhibaan Dalxa oo kamid ah Gollaha Shacabka Baarlamaanka Somalia.
BF oo ansixiyay xeer ogolaanaya in ajnabi madax ka noqdo Bangiga Dhexe
Soomaliya 14.01.2019. 13:56
Xeerkan ayaa u golonaaya Villa Somalia inay nin ajanbi ah loo dhiibo xil muhiim ah.
Bangiga Dhexe oo Madax looga dhigayo Nin Ajnabi ah iyo dood ka dhalatay
Soomaliya 12.01.2019. 11:05
Xildhibaanno sharci-darro ku tilmaamey Garsooreyaal uu Farmaajo magacaabey
Soomaliya 27.12.2018. 18:10
Fiqi: Villa Somalia waxay baahi u qabtaa hogaamiye xikmad iyo xilkas ah
Soomaliya 15.01.2019. 10:56
Farmaajo oo fariin adag u diray Booliska Somalia [Sawirro]
War Saxaafaded 20.12.2018. 17:33
Xukun lagu riday wasiir ka tirsan Xukuumada Somalia oo lagu helay musuq-maasuq
Soomaliya 17.12.2018. 00:49
Hanti dhowrka oo hor-tagey Gollaha Shacabka iyo dhaliilo loo jeediyay
Soomaliya 08.10.2018. 14:58
Farmaajo oo Gollaha Shacabka ka dalbaday inuu la shaqeeyo RW Kheyre
War Saxaafaded 10.05.2018. 17:21
Farmaajo oo fariin loo diray kahor furitaanka kalfadhiga baarlamaanka 05.06.2020. 21:50
Banaanbaxyadda Mareykanka: Donald Trump oo dacwad lagu soo oogay 05.06.2020. 16:08
Wadahadalada xabad-joojinta Libya oo lasoo dhaweeyay in dib loo bilaabo 05.06.2020. 15:30
Madaxweyne Deni oo ka tacsiyeeyay geerida Cabdi Tahliil Warsame 05.06.2020. 14:55
Soomaali kamid ah dad horleh oo Kenya ay ka heshay safmarka Covid19 04.06.2020. 21:35
Afar qof oo lala xiriiriyey maalgelinta afduubkii Silvia Romano oo la qabtay 04.06.2020. 20:55